Safarada Gaagaaban ee loogu Baxo Degaannada Miyiga ah amma Xeebta Waxay u Fiican Yihiin Maskaxda | Maankaab.com
Cilmi-baadhis cusub oo hadda la soo saaray, ayaa sheegty in safarada gaagaaban ee loogu baxo miyiga amma xeebaha waxa ay faa’iido caafimaad u leeyihiin maskaxda qofka.
Khubarada daraasadan soo saartay waxay sheegeen in meelaha dhirta cagaaran leh amma xeebta ah ay maskaxda siiyaan deganaan iyo in ay nasasho badan hesho. Waxa cilmi-baadhistan soo jeedisay in la ilaaliyo degaannada miyiga ah iyo waliba dhirta, maadaama ay ka qaybqataan caafimaadka bina’aadamka iyo hab-nololeedka noolaha kala gedisan.
Cilmi-badhayaashu waxay si gaar ah u xuseen in qofku haddii uu waqti ka badan 30 daqiiqo ku qaato degaan miyi ah amma xeebta ah maskax ahaan amma nafsi ahaan u degaayo.
Daraasada oo ay sameeyeen khubaro ka tirsan Jaamacadaha University of Surry, University of Exeter, University of Plymouth, Playmouth Marine Laboratory iyo Narual England, waxa baadhitaan lagu sameeyey 4,5000 qof oo dhammaantood waqti ku qaatay degaan dabiici ah. Waxa ay ahayd markii ugu horraysay ee koox khubaro ah baadhitaan ku samayso sida degaanku u saameeyo maskaxda iyo caafimaad qabka bin’aadamka.
Dr. Kayleigh Wyles oo ka socday Jaamacadda Surrey, cilmi-baadhistana hormood ka ahaa wuxuu yidhi; “Waxa aan in badan ku qaadanay ogaanshaha sida degaanka dabiiciga ah faa’iido inoogu leeyahay, wali waxa aan ku jirnaa sababta iyo sida uu inoo sameeyo. Waxa aan hadda helnay sida uu maskaxdeena caafimaad qabkeeda ugu faa’iido yahay, sababtoo ah deganaanteenu waxa ay ku xidhan tahay hadba inta degaan dabiici ah inagu xeeran yahay amma aan booqanno. Natiijada noo soo baxday waxay muhiim u tahay in la ilaaliyo degaanka iyo waliba in la sii baahdo ahmiyada degaanku leeyahay.”
Cilmi-baadhis sannadkii hore la daabacay, ayaa sheegtay in muddada dadku ku qataan degaanka baadiyaha ah ee barwaaqaysay ay faa’iido u leedahay muqaalka jidhkoodu sida uu u qurux bato iyo in qofku uu degenaan badan nafsi ahaan dareemo.
Darasadaas oo 199 haween iyo 200 rag ah oo da’doodu u dhaxaysay 19 ilaa 76 jir, una dhashay dalkaMaraykanka waxa ay dibada u soo saartay cilmi-nafsi ahaan in degaanka dabiiciga ah dawo yahay.